खाडीमा नेपालीकाे दर्दनाक अवस्था, १६२ पटक गर्दा पनि उठदैन् दूतावासको फोन ! - Himali Patrika
खाडीमा नेपालीकाे दर्दनाक अवस्था, १६२ पटक गर्दा पनि उठदैन् दूतावासको फोन !
हिमाली पत्रिका १३ असार २०७७, 5:12 am
दोहा I नेपालले बैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुले पठाएको पैसाले अहिलेसम्म मुलुक चलाइरहेको छ भन्दा पनि फरक नपर्ला तर पनि समस्या पर्दा नेपाल सरकार तथा खाडीस्थित त्यहाँ खोलिएका दूतावासहरु प्रया जस्तो रमिले जस्तै बनेर बसीरहेका छन् ।
गत हप्ता एउटा भिडियो भाइरल भयो त्यो भिडियो थियो यूएईस्थित नेपाली दूतावासमा आफ्नो समस्या लिएर पुगेका शिव बच्चन शाहको उनी कार्यरत कम्पनीले कामबाट निकाली दिएपछि आफ्नो समस्याको पोका बोकेर दूतावास पुगे तर दूतावासका कर्मचारीहरुको रुखो बोली लगायत विभिन्न कारणले उनको समस्या सुनुवाई भएन् I
उनी काठमाडौँको एक मेनपावर मार्फद एक लाख पचास हजार तिरेर दुबई पुगेका थिए । कोरोनाको कारण कम्पनीले कामबाट निकाले पछि उनी अलपत्र परे । उनले सोचे बिदेशमा नेपालीहरुको एक मात्र सारथी भनेको दूतावास हो तर अहिलेसम्म ४० पटक दूतावास पुग्दा पनि बेवास्था गरेको उनी बताउछन् ।
यता नुवाकोटका कुल प्रसाद वस्तीको पनि समस्या उस्तै छ उनी पनि घरपरिवारको समस्याका कारण नेपाल फर्किन भनेर दूतावासले उपलब्ध गराएको अनलाइन फारम भरे तर दूतावासले दोश्रो पल्ट प्रकाशित गरेको स्वदेश फर्किनै सूचीमा उनको नाम आएन् I
उनी भनछन् दूतावासको नम्बरमा १६२ पटक फोन गरे एक पटक पनि दूतावासले फोन उठाउदैन अब के गर्ने ? धेरै युवाहरुको अहिले खाडी मुलुकबाट नेपाल फर्काउने क्रम चलिरहेको भए पनि वास्थबिक पिडितहरु भने खाडीमै रुमलिरहेका छन् ।
सरकारले उद्दार भने पनि टिकटको पैसा आफै तिर्नु पर्ने भए पछि अरु समस्या देखा परेको छ । पैसा हुनेले त टिकटको पैसा तिरेर आउने तर टिकट काट्ने पैसा नभएकाले के गर्ने खाडीका अधिकाम्स नेपाली श्रमिकहरुको अवस्था उस्तै छ ।
यता कतारमा रहेका मोहम्मद हानिफ मियाको पनि समस्या अरुको भन्दा कम छैन् । उनी पनि कतार आएको पाँच दिनमै बिरामी परे । त्यस पछि ८ दिन आईसियुमा बसेर उपचार गरे पछि कम्पनीले दुई महिना आराम गर्न भन्यो ।
पछि कोरोना सुरु भएसंगै कम्पनी पनि बन्द भयो र अहिले विगत चार महिना देखि उनी बेरोगारी भएर बसीरहेका छन् । बल्ल बल्ल कम्पनीले नेपाल फर्कने टिकट मिलाई दिएको थियो । तर लकडाउन र उडान बन्द भए पछि टिकट काटेर बसेका उनी नेपाल फर्किन पाएनन् । उनले पनि कतारस्थित नेपाली दूतावासमा फोन गरे तर दूतावासको फोन उठेन् I
एक पटक बल्ल बल्ल उठ्यो फारम भर्नु पर्छ भन्यो अनलाइन फारम पनि भरे अहिलेसम्म नाम आएन अब के गर्ने आफै अलमल पारेको छु । यता दूतावासले भने प्रथामिकता आधारमा नामावली प्रकाशित गरेको बताए पनि वास्थबिक पिडितहरु समस्या उस्तै छ ।
खाडीका प्रया जसो दुतावासहरुको फोन नउठ्ने उनको गुनासो छ । यता यी समस्या र गुनासो बारे सम्बन्धित दूतावासहरुमा सम्पर्क गर्दा सबै समस्याहरुको समाधान हुने र समाधान गर्ने प्रयास भैरहेको जनाएका छन् ।